トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Twin Seoul izici (ukubukeka kobuso kwangaphakathi) nendlela yokuthola?
twin Seoul uthole [3500 yen Mahhala asihlole] ukuze izangoma iyisimo lapho lokho wayedabuka omunye umphefumulo ihlukaniswe ezimbili, ke yilokhu ngomqondo ongokomfanekiso, ezifana isigamu emzimbeni. Akuvamile ukuba sibhekane nale umphefumulo ayiwele naye, kodwa uma ungakwazi ukuhlangabezana uma, uzobe behlaselwa umuzwa ongavamile, kusukela kuleso sikhathi.
futhi njengoba kutsi bachubeke nebuhlobo nezinye party, engiyakuyithuma abazobamela nambitha kungekho usenjani ngaphambili. Uma evele amabili Seoul futhi ingxenye synchro futhi yakho ukubukeka kwangaphakathi, kukhona ingxenye ehluke ngokuphelele. Uma ngokucindezela
kulezo zici, abantu bahlangana manje Seoul twin sithande Ikeru isihambile esiteji for the umphefumulo babe munye ndawonye, ??abantu ukuhlangabezana kusukela manje sekulula ukuthola khona layo Xiang.
umphefumulo twin izici nendlela yokuthola, e
indlela yokuqinisekisa Ngakho iziphi izici nendlela yokuthola ezitholakala umphefumulo abangamawele. Njengoba
umphefumulo twin ukuthi ngokujulile bakhangwa lapho ehlangana
? kuyinto ekuqaleni umlingani wakhe, futhi nomunye ngokujulile bakhangwa lapho sihlangana okokuqala. Kuyinto umuzwa like kuthando lapho uqala, kodwa kungenziwa njengenkondlo ebonisa khona esisemqoka ngokwami ??hhayi nje uthando.
? izinga synchro kuphezulu
twin Seoul, ngokuvamile kakhulu ukuziphatha nokucabanga synchro ngoba wayengomunye ekuqaleni. Noma ngengozi luhlangabezane uma ngicabanga enye inhlangano, noma ijubane ukudla nezingxoxo ziyafana, ezifana noma ukucabanga into efanayo ngesikhathi esifanayo, synchro Amazing kwenzeke ngemva kwenye.
? ubuntu umphefumulo twin ukuthi wazi okuphambene ngokuvamile
1 umphefumulo owodwa, ubuntu kungokokwakhiwa inesithombe eqinile ethi ayifane, eqinisweni ngokuvamile kuba okuphambene nalokho. kuphela Futhi kusukela ezahlukene futhi usukhulile imvelo, futhi zikhona izingxenye engahambelani. Nokho, ungomunye isici kungaba ukwamukela a strange ngisho ngaleso ingxenye.
umphefumulo ayiwele naye, ngezinye izikhathi ukuze kuxoshwe isikhathi, kodwa athande kakhulu bazana, nokuthi ubuntu amaqiniso abonisa okuphambene, lowo muzwa inyuka ukuthi asifuni ukulahlekelwa iqembu kusukela kokwake ngu, kungase dudula nomunye ngaleso sikhathi. Futhi babe kungenzeka ukunambitha ubuhlungu obunjalo akufani soul mate, kuyoba isici umphefumulo twin buhlobo.
? Kukhona akukho emzimbeni akusho ukuthi kukhona abaningi
jikelele ukubukeka-ngokufanayo abafana, kodwa kuvamile ukuthi ezinye izitho zomzimba ziyinkimbinkimbi ngendlela efanayo. Ngokwesibonelo, izandla nezinyawo yefomu, ezinye izingxenye ubuso, kufana imvukuzane noma umkhangu indawo. Ngaphezu kwalokho, uma ungakwazi futhi kuyabonakala ukuthi kuyafana somkhuba izinwele.
futhi lapho kodwa kudingeka
umphefumulo twin izici ukuba banqobe nobunzima, kuyoba inkomba enkulu lapho ukuthola lowo muntu. Ubudlelwane phakathi abantu kulezi zici futhi kubuhlungu ukuthi ngaleso sikhathi, kodwa kubalulekile ukuba uthole phezu kwalo iya kwezinye kuphakamisa ngalinye nomunye.
Kuvamile ukuthi ezinye izitho zomzimba ziyinkimbinkimbi ngendlela efanayo. Ngokwesibonelo, izandla nezinyawo yefomu, ezinye izingxenye ubuso, kufana imvukuzane noma umkhangu indawo. Ngaphezu kwalokho, uma ungakwazi futhi kuyabonakala ukuthi kuyafana somkhuba izinwele.